IP Address Leetcode Solution - TutorialCup ကိုပြောင်းလဲခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » အိုင်ပီလိပ်စာ Leetcode Solution ကိုသတ်မှတ်ခြင်း
Tags: ကြိုး မင်းဘူး
ချဉ်းကပ်နည်း ၁ (String Stream / Builder ကိုအသုံးပြုခြင်း)
IP Address Leetcode Solution ကို Defanging လုပ်ရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
IP Address Leetcode Solution ကိုဖီဆန်ခြင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုဆန်းစစ်ခြင်း
ချဉ်းကပ်နည်း ၂ (In-built Function ကိုအသုံးပြုခြင်း)
ဤပြproblemနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား IP လိပ်စာတစ်ခုပေးသည်။ ၎င်းကို Defanged IP Address သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ output string တွင်“ ။ ” အားလုံးဖြစ်သည်။ "[။ ]" ကူးပြောင်းနေကြသည်။
address = "255.100.50.0"
ဤပြproblemနာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးထားသော string ကိုပြုပြင်ရန်ရိုးရှင်းသော string stream သို့မဟုတ် builder class ကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါတို့ကသုံးနိုင်တယ် string ကိုတည်ဆောက် (java ၏အမှု၌) နှင့် string ကိုစီး (C ++ ၏အမှု၌) ပေးထားသော string ကို output ကို string ကိုပြောင်းလဲရန်။
ကျနော်တို့ input ကို string ကိုမှလက်ဝဲမှညာဘက်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ဇာတ်ကောင် '' ဖြစ်ပါတယ်လျှင်။ ' ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် [[။ ]” output string ကိုဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျနော်တို့ output ကို string ကိုအတွက်လည်းဇာတ်ကောင်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ် ဦး အချည်းနှီးသောကြိုးစီးသို့မဟုတ်တည်ဆောက်ပါ။
ပေးထားသော string တစ်ခုစီ၏ character တစ်ခုစီကိုဖြတ်သန်းရန် for loop ကိုအသုံးပြုပါ။
string ကိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီဇာတ်ကောင်သည်။ ဇာတ်ကောင် '' ဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ " ထို့နောက် "[။ ]" string ကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြည့်ပါ။ အခြားသည် string builder နှင့်တူညီသောဇာတ်ကောင်ကိုထပ်ပေါင်းထည့်သည်။
stream / builder ကို string သို့ပြောင်းပြီးပြန်ပို့ပါ။
string defangIPaddr(string address)
ss<<"[.]";//replacing . with [.]
cout << defangIPaddr("1.1.1.1");
public static String defangIPaddr(String address)
အို ()) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးထားသော string ကို linear အဖြစ်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အို (n) ဖြစ်သည်။
အို ()) java တွင် string builder ကို သုံး၍ linear extra space နှင့် C ++ တွင် string stream ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုမှာ O (n) ဖြစ်သည်။
regex အစား function ကို C ++ တွင်သုံးပြီး java ရှိ function အားလုံးကိုအစားထိုးမည်။
regex_replace function ကို C ++ ကိုသုံးနိုင်သည်။ "[။ ]" ရန်။
ထို့အပြင်၊ java ကိစ္စတွင်“ allAll” ကိုအစားထိုးရန် replaceAll () function ကိုသုံးနိုင်သည်။ "[။ ]" ရန်။
return regex_replace(address, regex("[.]"), "[.]");
//. is covered by  from both sides because . itself works as pipe and will give wrong result if not used like [.]
A period (.) hasaspecial meaning there as doesapipe (|) as doesacurly brace (}).
You need to escape them all using // before '.'.
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: အမေဇုံ, လွယ်ကူသော, ကြိုး, မင်းဘူး post navigation